Muxuu ka yiri Marcelo muuqaalkii cajiibka ahaa ee fiidiyowga uu kala soo muuqday wiilkiisa yar xidigaha Real Madrid maalmo yar ka hor? – Gool FM
Muxuu ka yiri Marcelo muuqaalkii cajiibka ahaa ee fiidiyowga uu kala soo muuqday wiilkiisa yar xidigaha Real Madrid maalmo yar ka hor?
(Real Madrid) 21 Maajo 2018. Difaaca kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil Marcelo ka hadlay muuqaalkii cajiibka ahaa ee fiidiyowga uu kasoo muuqday wiilkiisa yar maalmo yar ka hor, wuxuu muqaalkan kala soo hor muuqday qolka labiska ee xidigaha kooxda Real Madrid.
Marcelo ayaa u sheegay wargeyska Marca ee dalka Spain: “Xili kasta wuxuu tababar la qaadan jiray aniga, waxaan wada ciyaareenay aniga iyo Casemiro, wuxuu igu yiri u ogoloow wiilkaaga inuu sameeyo 15 baas ee dhanka madaxa ah”.
“Waxaan u sheegay Enzo, inaan sameyno 25 jeer oo sidaas ah, waan sameynay ka dib markii aan isku daynay dhowr jeer, Enzo waa 8 jir, laakiin waxa uu sameeyay, waxay ku adag tahay xitaa xidigaha ku xamaasha kubada cagta”.
Dhinaca kale wiilka yare e Marcelo ayaa wuxuu isna sheegay: “Waxaan in badan tababar kula sameeyaa guriga aabahay, way adag tahay in aad kubada dhejiso, sababtoo ah aad ayay u xooganeed, laakiin waxaan u ciyaaray si adag”.
Neymar hooyadiis oo ka caraysan Nasser Al-Khelaifi isla markaana ka shiftay hadalkii ciyaartoyda Real Madrid ay ku dheheen wiilkeeda
Kabtanka Real Madrid oo Daaha ka rogay sida ay ku joojin doonaan Maxamed Saalax iyo Roberto Firmino Finalka Champions League